Task Tray, maaree codsiyada xagga dambe | Androidsis
Task Tray, maaree codsiyada asalka
Maamulka taas sameeya Android Marka laga hadlayo codsiyada asalka ah, waa wax la yaab leh kuweena loo bartay nidaamyada hawlgalka PC kaas oo lagu xidho codsi waa lagama maarmaan in isticmaalehu fuliyo talaabada. Android Waxaa loo qaabeeyey si uusan isticmaaluhu uga walwalin maamulkan waana nidaamka qalliinka laftiisa ee maareeya howlaha isla markaana u xira sida ugu habboon.
Qaab gaar ah waa macquul in loo maleeyo in midka sida ugu fiican u yaqaana sida nidaamka loo raro uu yahay nidaamka hawlgalka laftiisa. In kasta oo ay jiraan dhowr siyaabood sidee Android wuxuu daaweeyaa codsi kasta, iyadoo kuxiran waqtiga uu gadaal ka qaadanayo iyo isticmaalka loogu talagalay, waxaan dhihi karnaa taas Android Waxay xireysaa codsiyada maaddaama ay u baahan tahay xusuusta wananka si loo furo kan soo socda iyo in dhammaan kuwa furan si sax ah loo fulin karo. Sidan oo kale isticmaaluhu waa mid aan daryeel lahayn oo kaliya waa inuu furaa arjiga uu rabo waqtiga uu doonayo iyo Android wuu xiri doonaa markuu tixgeliyo inaysan jirin xusuus dambe oo uu furo mid kale.
Waan geli karnaa taasi waxay sababi kartaa ilo badan iyo batteri badan in la cuno maaddaama codsiyada aan la xirin, iwm ... Xaqiiqdii batteri badan ayaa la cuni doonaa laakiin codsiyada ayaa weli ah kuwo hurdo la'aan ah oo isticmaalkuna uu yar yahay ama ugu yaraan taasi waa aragti. Iyaga oo aad ugaga tagtid qaabkani waa hadii ay dhacdo inaad kusoo noqotid mudo yar gudahood si aad ugu isticmaasho isla codsi, si dhakhso leh ayey u furi doontaa maadaama aanu xirnayn Shakhsiyan, waxaan u maleynayaa in noocyada dalabyada qaarkood ay suuragal tahay inay ku xirmaan adeegsadaha.
Sikastaba ha ahaatee waxay ka jiraan Suuqa Android waxoogaa codsiyo ah oo ina tusaya dhammaan howlaha socda isla markaana na siinaya ikhtiyaarka aan ku xirno, codsiyada qaar tani waxay noqon kartaa waxoogaa khatar ah marka loo eego macnaha inaan xiri karno annaga oo aan ka warqabin maareynta qaar aan runtii dooneyno inaan furno
Saxarka Hawsha Waa mid ka mid ah barnaamijyadan naga caawinaya inaan maamulno barnaamijyada aan ku hayno asalka. Iyadoo Saxarka Hawsha adigoo riixaya wakhti dheer badhanka raadinta ee terminalka ama kamarada ayaa nagu tusi doonta baarka hoose ee hoose dhamaan codsiyada aan xiri karno. Si aad u xirto, kaliya riix arjiga la xushay waxayna na tusi doontaa sanduuqa wada hadalka halkaas oo aan ka dooran karno xiritaankiisa.
Haa, waxay umuuqataa sida Apple u maareyneyso wicitaankaaga badan, oo aan sameyn doonno.
Codsigu wuxuu ku jiraa beta laakiin waa mid shaqeynaya oo bilaash ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Task Tray, maaree codsiyada asalka
Wixii aan raadinayey, mahadsanid.
Waa waxa ugu dhaw ALT + TAB kombuyuutar ee la heli karo.
Ku jawaab Spoolk
woow, markasta oo aan xiiseeyo App ka dib lama heli karo, xitaa markaan suuqa ka raadsado
qofna ma garanayaa sababta?
LG Ally wuxuu ku soo baxaa qeexitaan buuxa
Motorola MT810, kii ugu horreeyay ee Android ah oo wata shaashad laba-gees ah